Madaxwayne Farmaajo oo weerar Afka ah ku qaaday DP World – Daily Som
Madaxwayne Farmaajo oo weerar Afka ah ku qaaday DP World
Madaxwaynaha Jamhuuriyada Fedaraalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajho oo furay kala hadhiga sadexaad ee Baarlamaanka ayaa ka hadlay arimo dhowr ah oo ay ka mid tahay Shirkadaha Shisheeye ee doonaya in ay maal gashi ku sameeyaan dalka kuwaas oo an ogalaasho ka haysan Dowlada Fedaraalka ah ee Soomaaliya.
Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale uga digay dalalka iyo shirkada Shisheeye ee doonaya in ay ka faaiideystaan Khayraadka dalka in ay ku xad gudbaan Midnimada, wada jirka iyo Madax banaanida Soomaaliya.
Hadalka madaxwaynaha ayaa si toos ah u abaaraya Shirkada DP World ee laga lee yahay Dalka Imaaraatka Carabta oo heshiisyo shaci dara ah la gashay Maamulada Somaliland iyo Puntland, iyada oo kula wareegtay Dekad 2 iyo 3 aad ee ugu wayn dalka.
Todobaadki hore ayay ahayd Markii uu Agaasimaha DP World uu sheegay in Somaliland tahay Dal Madax Banaan isla markaana aysan Qusayn Doowlada Soomaaliya Heshiiska 3 geesoodka ah ee udhexeeya Somaliland DP World iyo Itoobiya.
Madaxwayne Farmaajo oo weerar Afka ah ku qaaday DP World added by Staff on March 10, 2018